Momba anay - SHENZHEN RIKO INDUSTRIAL
Ny RIKOLITE dia manolotra vokatra sy vahaolana hazavana jiro sy angovo.
Izahay dia manome ny vokatra jiro mpanavao an'ny firaketana izay mampiditra reflektory fitaratra optika vaovao izay mitahiry fitehirizana angovo farany raha mitombo ny angovo. Ny vokatra avy any aminay dia ampiasaina betsaka amin'ny jiro hortikultural, jiro indostrialy, jiro, fanalan-javamaniry ary jiro mipetraha sns.
Nametraka fifandraisana maharitra sy akaiky kokoa izahay ary ny mpanjifanay sy ny mpamatsy tolotra tsy vitan'ny hoe manome serivisy haingana sy azo itokisana fa mba hihoatra ny fanantenany sy ny tanjontsika. Izahay dia mamorona arofera ara-barotra, manafatra ary manondrana vokatra, mandamina ary mitantana tetikasa iraisam-pirenena amin'ny mpiara-miasa aminay.
Mino izahay fa ny fahamarinana, fahitsiana, fangaraharana ary fahamasinana no fototry ny fitokisana & fahombiazana. Fitiavana, fitiavana, fihetseham-po tsara, tiantsika ny ataontsika. Tongasoa eto raha hifandraisa aminay amin'ny fiaraha-miasa. Andao hamirapiratra hoavy mamirapiratra!
SHENZHEN RIKO INDUSTRIAL dia manolotra vokatra sy vahaolana vahaolana maivana sy angovo.
Manolotra jiro mamolavola fanjakana izahay izay mampiditra reflektory fitaratra optika vaovao ary mitahiry fitahirizana angovo farany eo am-pamatrarana ny famokarana angovo. Toeram-pitaovana kalitao sy fananana ambony indrindra Max.
Ny mpamatsy vokatra lehibe anay:
- Jiro mitombo avo roa heny
- Jiro fitomboan'ny CMH & LEC
- Jiro LED mitombo
Mba hiteraka fitsipi-pitenenana avo lenta amin'ny mpanjifantsika
Mba hitsaboana ny mpanjifanay, mpamatsy sy mpiasam-panjakana am-pahamarinana sy fanajana
Amin'ny fitomboana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny fiainanao manokana
Manolotra haavon'ny serivisy tsy misy dikany amin'ny vidiny mifaninana
Uv Lamp For Plants, Arotsaha fanaovan-jiro ho an'ny zavamaniry anatiny, Jiro fitomboan'ny fambolena, Jiro anatiny, Tariby hitondrana, Jiro mitombo,